Karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana maimaim-poana alaina: tranonkala tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Nerea Morcillo | | General, Inspiration
Ny karatra fiarahabana dia efa hita hatrany amin'ny fiainantsika andavanandro. Lasa fanao isan’andro ny fiarahabana olona iray, ny tsy fantatry ny maro dia ny ao ambadiky ny karatra fitsingerenan’ny andro nahaterahana tsirairay.
Izany no antony, ato amin'ity lahatsoratra ity, dia mankalaza isika, satria tsy hoe hasehontsika anao ny toetra sasany amin'ireo karatra izay fantatsika rehetra sy efa azontsika taloha, fa koa, hasehontsika anao ny sasany amin'ireo tsara indrindra. karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana noho izany dia tsy manana fialan-tsiny rehefa tonga ny fiarahabana olon-tiana.
Mazava ho azy, Hanolotra ny sasany amin'ireo pejy tsara indrindra ahafahanao misintona azy ireo izahay.
Ary tsy izany ihany, ny sasany amin'ireo programa ahafahanao mamolavola azy ireo araka izay tianao.
1 Karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana: Inona ireo?
1.1 Karazana karatra
1.1.4 Habe lehibe
1.2 Tantara kely
2 Ny fampiharana tsara indrindra
2.2 Mpanamboatra karatra orinasa
3 Fampiharana hafa mahaliana
3.2 fanomezana tany am-boalohany
Karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana: Inona ireo?
karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fiarahabana, dia faritana ho karazana karatra izay ny hafatra no tena mpandray anjara, satria feno teny mahafinaritra izy ireo, satria ny hafatra dia mampiseho fahasambarana. Matetika izy ireo dia karatra manana toetra ara-tsosialy satria matetika izy ireo no ampiasaina amin'ny fotoana sasany amin'ny taona na amin'ny fankalazana sasany, ohatra, afaka mahita karatra misy olona arahabaina amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany na noho ny Krismasy fotsiny. Misy ny hafa izay miarahaba ny tenany noho ny asa na noho ny zava-bitany, na ara-panatanjahantena na manokana.
Amin'ny ankapobeny, ireo karatra ireo dia matetika miaraka amin'ny valopy manondro ny anaran'ny olona itondrana azy.
Misy karazana karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny tsirairay amin'izy ireo dia manana toetra izay mahatonga azy ireo ho mora kokoa na tsy dia mamorona, fa ny zava-dehibe dia ny mitazona ny maha-izy azy.
Ny karatra fiarahabana mozika dia miavaka, araka ny lazain'ny anarany, amin'ny fampidirana mozika ao anatiny. Izy ireo dia vita amin'ny fanamafisam-peo kely miaraka amin'ny batterie sy ny fizaran-tany izay miaraka amin'ny fotoana marina hanokafana ny karatra. Rehefa manokatra ilay karatra ilay olona dia avitrika izany ary re ny feon-kira mamy ary mihetsiketsika miaraka amin'ny hafatra entiny ao anatiny.
Tena mampiavaka azy ireo satria ampiasaina amin'ny fotoan'ny Krismasy. Ankoatr'izay, matetika izy ireo dia manana habe tsy dia lehibe, ohatra, ny ankamaroany dia natao amin'ny habe tsy mihoatra ny DIN A5. Tena mamorona izy ireo ary mitady ny lafiny saro-pady indrindra amin'ny olona amin'ny alàlan'ny mozika.
Karatra fiarahabana 3D Izy ireo dia miavaka amin'ny fampidirana andiana relief sy endrika misongadina mba hanomezana endrika endrika telo. Karatra tena mamorona sy mahafinaritra izy ireo, izay misy ny asa lehibe indrindra amin'ny animation.
Tahaka ny nanamboarana karatra ara-batana ihany koa dia afaka mahita azy ireo amin'ny Internet ihany koa isika. Ankoatra izany, mihamaro ny olona mandefa karatra fiarahabana samihafa amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny fampiharana hafatra. Tena mahazo aina sy tsotra izy ireo. Ho fanampin'izay, tena haingana izy ireo satria amin'ny tsindry iray dia afaka mandefa azy ireo eo no ho eo ary tsy mila manoratra ny hafatra.
Efa zatra mahita karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana manara-penitra izay tsy lehibe loatra ary tsy kely loatra. Tsy isalasalana anefa fa misy koa ny karatra fiarahabana goavana. Ireo karatra ireo dia miavaka amin'ny fananana refy tena lehibe amin'ny habeny.
tonga lafatra, Ny tsirairay amin'ireo tonga lafatra ireo dia afaka mandrefy mitovy amin'ny DIN A3, na dia tamin'ny fotoana sasany aza dia nisy DIN A1 hita. Izy ireo no karatra tonga lafatra raha te hahagaga an'io olona io amin'ny fomba lehibe ianao, ary tsy tsara kokoa ny miteny. Sahia ary manomboka mampiasa azy ireo.
Na mino ianao na tsia, misy tantara mahaliana ao ambadik'izany ny karatra fiarahabana na carte postale. Mba hahafantarana izany, dia ilaina ny mandeha mankany amin'ny 1869. Ny sampan-draharahan'ny paositra Aostralia-Hongroà malaza no voalohany nanamboatra an'io karazana bokikely vita pirinty io.
Tany Espaina, nanomboka nahazo lanja ny carte postale tamin'ny taona 1873, carte postale tsy ampy sary izy ireo, tsy nanana toerana afa-tsy ilay hajia malaza sy boaty kely ho an'ny sary. Kely lavitra noho ny fantatra ankehitriny izy ireo ary nanomboka teo dia lasa singa manan-danja sy fomba fampitana hafatra.
Ny fampiharana tsara indrindra
Raha tsy maintsy misafidy eo amin'ny safidy maro hafa isika, tsy isalasalana, ny tena lehibe dia ny Canva. Canva dia karazana tonian-dahatsoratra an-tserasera ahafahanao mamolavola karazana singa rehetra: kalandrie, karatra, afisy, takela-by, sns.. Izy io dia misy fonosana sary sy singa sary izay afaka manampy anao hamolavola ny carte postale na karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana indrindra izay hitanao hatrizay.
Ankoatra izany, noho ny maodely, afaka manao ny asa haingana kokoa sy mora kokoa noho ny mahazatra ianao, satria ny sasany amin'izy ireo dia miaraka amin'ny endritsoratra sy loko voafantina.
Mpanamboatra karatra orinasa
Miaraka amin'ity fampiharana ity dia afaka mamolavola na mamorona karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahanao ianao nefa tsy mandoa izany. Maimaimpoana tanteraka ny fampiharana ary manana fitaovana sy fiasa samihafa hamolavolana. Ary koa, noho ny fahasamihafàna atolony ao amin'ny interface, dia afaka mamorona karatra amin'ny endrika sy habe rehetra azo atao ianao.
Izy io koa dia manana fonosana endritsoratra, sary, loko ary sivana mahaliana maro izay hanaitra ny olona mandray ny karatrao. Tsy isalasalana fa ny fitaovana sy fampiharana tonga lafatra hahatonga an'io olona io ho tena manokana ho anao ary ho gaga amin'ny endrikao.
Miaraka amin'ny Cam Card dia tsy ho afaka hamolavola ireo karatra ianao fa ho azonao atao ny mijery azy ireo. Io no programa tonga lafatra raha ny tadiavinao dia ny mijery ny drafitrao ary mampiasa azy ireo amin'ny tanjona hafa. Manana dikan-teny beta na maimaim-poana izy io izay ahafahanao mitahiry karatra 250, izay mety tsara satria ahafahanao mitahiry ampahany betsaka amin'ny karatra novolavolainao.
Toy izany koa, toy ny endri-javatra, manolotra ihany koa ny fahafahana mizara amin'ny alalan'ny Bluetooth na zarao amin'ny mailaka, ny sasany amin'ireo endrika nataonao dia efa notarafina. Ao amin'ny fampiharana tonga lafatra raha te hanome azy fikasihana hafa ianao.
Loharano: Review Professional
Raha ny zavatra tadiavinao dia ny mamorona karatra matihanina sy mamorona kokoa, miaraka amin'ny InDesign dia manana ny vahaolana ianao. Izy io no fitaovana tonga lafatra amin'ny fametrahana sy fandrafetana singa amin'ny endrika tonian-dahatsoratra.
Ankoatra izany, manana endri-tsoratra samihafa izy, mba tsy ho lavo na fohy amin'ny famolavolanao. Izy io koa dia manolotra karazana lahatsoratra sy safidy paragrafy izay ahafahanao mamolavola tsara ary miaraka amin'ny fizarana marina ny lahatsoratra. Mankanesa any amin'ny Adobe ary andramo ireo safidy samihafa atolony.
Raha efa niresaka momba ny layout isika teo aloha, dia hiresaka momba ny famolavolana ny sarinao manokana na singa sary amin'ny karatrao. Miaraka amin'ny Illustrator, Tsy vitan'ny hoe mamolavola ny zava-drehetra ho ivelan'ny karatrao ianao, fa koa ireo kisary kely na vectors ilainao. Ny zavatra mahafinaritra amin'ity fampiharana ity dia manana fomba fanondranana sy fanontana samihafa izy, miampy ny mombamomba ny loko roa tena ilaina, RGB sy CMYK.
Tsy isalasalana fa ny fampiharana ilainao hamelomana ny karatrao sy ny endrikao. Ho fanampin'izany, azonao atao ny manandrana sy mamoy ny tenanao ao anatin'ny kitapo misy borosy.
Fampiharana hafa mahaliana
Pinterest no fitaovana kintana ho an'ireo izay mila aingam-panahy. Manana sary maherin'ny 5000 amin'ny karazana sy kilasy samihafa izy io. Tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny motera fikarohana fotsiny ilay teny dia hampiseho aminao sary tsy manam-pahataperana ny zavatra notadiavinao.
Tena tsara izany raha toa ianao ka tafahitsoka amin'ny dingan'ny famolavolana. Noho izany, manana sary an'arivony sy an'arivony afaka manampy anao hamolavola ny karatra fiarahabana tonga lafatra. Ho fanampin'izay, manana fampianarana kely ihany koa izy io izay ahafahanao manaraka sy mitsapa azy ireo amin'ny famolavolanao.
fanomezana tany am-boalohany
Miaraka amin'ny Original Gift dia tsy vitan'ny hoe mamorona fanomezana manokana ianao fa ity tranokala ity ihany koa dia manana fahafahana mamorona carte postale misy sary manokana. Izy io no fitaovana tonga lafatra hahagaga sy hahafaly satria tsy vitan'ny hoe manamboatra carte postale na karatra fotsiny ianao fa miaraka amin'ireo singa hafa mahaliana amin'ny fotoana manokana amin'ny taona: Krismasy, Andron'ny mpifankatia, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, sns.
Mila mikaroka fotsiny eo amin'ny tabilao misy azy ianao momba ny karazana vokatra tadiavinao ary manao fikarohana haingana izy ary mampiseho anao ny sasany amin'ireo safidy mitovy na mitovy aminy. Tena lavorary izany.
Raha fintinina, miaraka amin'ity andiana rindranasa sy tranokala narosonay ity dia tsy manana fialan-tsiny intsony ianao tsy hamolavola ny anao manokana. Ny karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana, araka ny voalaza etsy ambony, dia efa anisantsika ary mbola ao anatintsika ankehitriny.
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, azo atao ny mamolavola azy ireo amin'ny alàlan'ny Internet, maro amin'izy ireo no efa tonga miaraka amin'ny maodely izay manao ny ankamaroan'ny asa famoronana. Ny hany sisa tavela dia ny mitsambikina sy manandrana ny sasany amin'ireo programa voalazanay ary ho lasa mpamorona karatra fiarahabana tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana maimaim-poana alaina
Ahoana ny fomba hanaovana triptych